Azo atao ve ny mifehy ny nify amin'ny anabavy?
Ny toothache dia mety hitranga amin'ny fotoana tsy ampoizina indrindra amin'ny olona, ​​fa tsy ny vehivavy miandry ny fahaterahan'ny fiainam-baovao. Io fahatsapana mahatsiravina io dia tena manasitrana ny fiainan'ny reny amin'ny hoavy ary matetika dia manampy amin'ny fikorontanana ny torimaso, noho izany dia ilaina ny manaisotra izany haingana araka izay tratra.
Na izany aza dia maro ireo vehivavy izay manantena ny fahaterahan'ny zazakely, manemotra ny fitsidihan'ny mpitsabo nify iray noho ny tahotra ny fanimbana zazakely ho avy. Ny tena mahaliana azy ireo amin'ity tranga ity dia ny fampiasana zava-mahadomelina anesthetika mandritra ny fitsaboana ara-pahasalamana na fikarakaram-batana.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiteny aminareo izahay raha misy vehivavy bevohoka afaka mitondra vohoka na voatery amin'ny fanarahan-dalàna, ary ahoana no mety hisy fiantraikany amin'ny toetrany.
Ny fampandeferana amin'ny fampiasana na fanesorana ny nify mandritra ny fitondrana vohoka dia mety hampidi-doza tokoa. Izany dia noho ny fisian'ny fanafody amin'ny tranga toy ny adrenalinina matetika.
Vokatry ny fitarainany, manjavozavo ny lalan-drà ny ra, izay mampihena ny fihenan'ny ra, ary mihen-danja ny fahatsapana mampangirifiry. Izany rehetra izany dia miteraka fitomboan'ny fanerena, izay, indrisy, dia afaka mampitombo ny tonon-taonan'ny uterus.
Manana fiantraikany ratsy eo amin'ny fahasalamana sy ny fiainan'ny zaza ao an-kibon-dreniny io fitondram-panjakana io, ary amin'ny tranga tena izy dia mety hiteraka fampijaliana na fanombohan'ny fahaterahana vao haingana. Izany no mahatonga ny fampiasana fanaintainana noho ny adrenalinina amin'ny fotoana iandrasana ny zazakely dia mifanohitra tanteraka.
Mandritra izany fotoana izany, amin'izao fotoana izao, amin'ny fitsaboana na ny fanesorana ny nify, dia azo ampiasaina ny fanabatabana izay azo antoka ho an'ny vehivavy bevohoka. Ireo zava-mahadomelina dia Primacaine sy Ultracaine, izay misy articaine sy epinephrine - zavatra tsy misy fiantraikany ratsy amin'ny foetus sy ny fahasalaman'ny renim-pianakaviana.
Ireo medikaly ireo dia tsy afaka miditra amin'ny sakana tsy mitongilana, ka azo ampiasaina rehefa miandry ny sombiny, tsy misy ahiahy momba ny toe-tenany. Mba hisorohana ny vokatra mampidi-doza, raha ilaina ara-pahasalamana na fitsaboana ny nify mandritra ny vanim-potoanan'ny bevohoka, dia ilaina ny mampahafantatra ny dokotera ny toe-javatra misy azy ireo ary manankina ny manam-pahaizana momba ny fahaiza-manao mba hisafidy ny zava-mahadomelina ho an'ny fanenjehana sy ny fanafody.
Fanafody ho an'ny vehivavy bevohoka
Resa-résus nandritra ny fitondrana vohoka faharoa
Ny tsy fahasalaman'ny vehivavy bevohoka
Fikomiana ao amin'ny foetus
Pathology ny zaza vao teraka
Phytolysin amin'ny fitondrana vohoka
Lamina amin'ny tsiranoka avy amin'ny hopitaly
Ny zanak'omby mainty amin'ny bevohoka
Ny fitsirihana dia tsy mampiseho ny fitondrana vohoka
Ahoana no mampitombo ny cashew?
Takela-by ho an'ny lakozia
Kiprayny tea - tsara sy ratsy
Inona no spam amin'ny e-mail ary ahoana no hiatrehana izany?
Wedding fampakaram-bady ho an'ny brunettes
Kianja ho an'ny lava-pady
Andraikitr'i Andrey amin'ny fandresena amin'ny 13 Desambra
Ny Institute of color Pantone ho fanomezam-boninahitra ny Prints antsoina hoe aloky volomparasy
Lamina manify ao an-trano
Inona no nofinofy?
Ny hazon'aina - inona no dikan'izany ary ahoana no fijery azy?
Ahoana ny fomba hamadihana voanio?
Magnesia ho an'ny fatiantoka